Shiinaha Valerophenone tayo sare leh CAS 1009-14-9 oo ka socda warshada Shiinaha ee warshada Valerophenone iyo soosaarayaasha | Guanlang
Tayo sare leh Valerophenone CAS 1009-14-9 oo ka socota warshada Shiinaha ee Valerophenone
Erayo la macno ah
dareere aan midab lahayn
Biyaha aan lagu milmin.
Badeecadan iibinta kulul waa Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone), oo ah ketone-ka udgoon. Qaaciddada molikaliska ah ee Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) waa C11H14O.Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) waa dareere aan midab lahayn oo dhibic birtiisu tahay 102 ° C. Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) waa reagent kiimiko dabiici ah. Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) waxaa loo isticmaalaa qalab ahaan barashada hababka kala duwan ee sawir qaadista.
Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) sidoo kale waa kahortaga enzyme carbonyl reductase. Waa inay ku kaydisaa meel qabow, qalalan, hawo wanaagsan leh oo ka fog maaddooyinka aan is-waafaqi karin. Wax soo saarkeena sanadlaha ah wuxuu gaari karaa 500 ilaa 800 tan. Su'aalo kasta oo kale oo ku saabsan Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) na soo wac ama noo soo dir fariin. Waxaan sidoo kale kugula talin karnaa alaabooyin badan oo la xiriira oo sugaya baaritaankaaga.
Waxaa jira laba nooc oo xirxirida loogu talagalay Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) oo ay soo saartay shirkadeena, xirxirida yar waa 25kg durbaan kan ugu weynna waa 200kg durbaan.
Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) waa badeecad aan khatar lahayn, oo si fudud loo qaadi karo.
Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) hadda aad baa looga jecel yahay waddamo badan, shirkadeenuna waa koox xirfadlayaal ah, marka aad bixinayso oo keliya alaab la sugo oo la helo, Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) waqtiga dhalmada si dhakhso leh, kaliya 24 saac gudahood ayaan ku diri karnaa, sababta aan u gaarsiino Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) si dhakhso ah maxaa yeelay waxaan leenahay keyd ku filan.
Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) oo ay soo saarto shirkadeena waxaa inta badan loo dhoofiyaa Yurub iyo qaar ka mid ah wadamada Koonfurta Ameerika, sida Mareykanka, Mexico, Guatemala iyo Paraguay. In kabadan 90% macaamiisha ayaa doorbidaya Guanlang.
Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) oo ay soo saarto shirkadeena waxaa loo dhoofiyaa Ruushka iyadoo la raacayo khad gaar ah oo Ruush ah, kaas oo ka badbaado badan kana sahlan gaadiidka. Sidaa darteed, inta badan macaamiisha Ruushka waxay mudnaan siin doonaan Guanlang si ay u soo iibsadaan Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) iyo alaabooyin kale oo la xiriira phenylpentanone.
Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) oo ay soo saarto shirkadeena ayaa sumcad wanaagsan ku dhex leh macaamiisha.
Shirkadayadu waxay kaloo soo saartaa alaabada kale ee ketone-ka udgoon ee la mid ah Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone):
Hore: Saldhigga Procaine / Procaine Base CAS 59-46-1 muunad bilaash ah oo si dhakhso ah loo bixiyo
Xiga: Procaine hydrochloride CAS 51-05-8
Saldhigga Procaine / Procaine Base CAS 59-46-1 lacag la’aan ...
Dhexdhexaadinta Dawooyinka 4′-Meth ...